M Bụbu Onye Agha Nnupụisi Na-ekweghị na Chineke, Mechaa Fewe Chineke | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
A MỤRỤ YA N’AFỌ 1944
E MERE YA BAPTIZIM N’AFỌ 1964
ONYE Ọ BỤ O kwebughị na Chineke, ugbu a, o jeerela ya ozi afọ iri ise.
MGBE m bụ okorobịa, otú ndị okpukpe si akpọ ibe ha asị mere ka obi na-ajọ m njọ. Amaghị m ihe mere Chineke emebeghị ka ịda ogbenye na mmegbu kwụsị nakwa ihe mere ọtụtụ ndị sịrị na ha na-efe Chineke anaghị eme ihe Baịbụl kwuru. Ihe a niile mere ka m ghara ikwere na Chineke dị, meekwa ka m chee na ọ bụ naanị ịgbanwe ọchịchị n’ike ga-eme ka ụwa dị mma.
Amalitere m ịgụ Teta! n’afọ 1962, mụ na Ndịàmà Jehova amụwa Baịbụl n’afọ 1963. Ihe ndị m mụtara baara m uru. O mere ka m mara na e kwesịghị ịta Chineke ụta n’ihi ihe ọjọọ okpukpe dị iche iche na-eme, nakwa na Chineke nwere ezigbo ihe ọ ga-emere ndị mmadụ. Ọnwa abụọ m bidoro ịmụ Baịbụl, m malitere ịkọrọ ndị ọzọ na Alaeze Chineke ga-ewepụ ọchịchị ọjọọ ndị mmadụ na-achị ma chịwa ụwa. E mere m baptizim n’afọ 1964. Aghọkwara m onye ọsụ ụzọ pụrụ iche n’afọ 1966. O doro m anya na ọgbakọ Chineke m batara mere ka m dịrị ndụ ruo ugbu a n’ihi na ọtụtụ ndị mụ na ha nọrọ n’òtù nnupụisi anwụọla ọnwụ ike. A tụkwara ụfọdụ mkpọrọ, ebe ndị ọzọ gbalara obodo ọzọ. M na-ekele Jehova maka na o mere ka m na-efe ya, ọ bụ eziokwu na ekwebughị m na ya. O kwekwara anyị nkwa na ya ga-eweta ụwa ọhụrụ nke ezi omume ga-ebi na ya.
Mgbe Nwanna Crispín na-eduzi nnọkọ ụtụtụ ezinụlọ Betel na-enwe maka ịtụle Okwu Chineke
mailto:?body=M Bụbu Onye Agha Nnupụisi Na-ekweghị na Chineke, Mechaa Fewe Chineke%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302015025%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=M Bụbu Onye Agha Nnupụisi Na-ekweghị na Chineke, Mechaa Fewe Chineke